हरेकका लागि खुशी हुने कुरा फरक फरक हुन्छ । सानो छंदा खेल्न जान पाउने कुरा, नयाँ जामा लगाउन पाउँदा खुशी लाग्थ्यो । अलि ठूलो भएपछि सिनेमा हेर्न जाँदा खुशी लाग्थ्यो । विहे गरेपछि बच्चा जन्मंदा, उसलाई हुर्काउँदा खुशी भएँ । बीचमा तलव बढ्दा खुशी मिल्थ्यो । तलवले घडी किन्दा उस्तै खुशी । पहिलोचोटी मारुती किन्दा खुशीको सीमा भएन । तर अहिले मसँग सबैथोक छ । अहिले र्याफो गाडीले पनि मेरो त्यो मारुतीको जति खुशी दिन सक्दैन । फष्ट टाइम पेपरमा मेरो बारेमा थोरै लेखिंदा पनि ओहो खुशीले कति पटक पढेँ । तर अहिले कहाँ के छापिएको छ यसो हर्यो, सकियो । अलिकति खुशी पनि दिंदैन । के छैन मसँग ? तर केहि कुराले खुशी दिंदैन । यहिले म गाडीमा घर फर्कंदै गर्दा बाइकमा या साइकलमा भएको कसैलाई या भारी बोकेर फर्कंदै गरेको कसैलाई स्माइलले के छ, ठीक छ ? भनेर सोध्न पाउँदा, इसाराले उसको मन तानेर स्माइलमा ल्याउन पाउँदा कार किनेको भन्दा धेरै खुशी लाग्छ । त्यसैले हरेकलाई खुशी हुने कुरा फरक हुन्छ, समय अनुसार । मेरा खुशी हुने चिज झनै साना र सुन्दर छन् । (चक्रपथ बाट साभार)